Sawir uu CC SHAKUUR ku dhagsaday meel u dhow Villa Somalia oo laga fujiyay | Warkii.com
Home warkii Sawir uu CC SHAKUUR ku dhagsaday meel u dhow Villa Somalia oo...
Sawir uu CC SHAKUUR ku dhagsaday meel u dhow Villa Somalia oo laga fujiyay
Xubno kamid ah Xisbiga Wadajir ee uu hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa Warkii.com u sheegay in laga fujiyay Sawir uu musharaxnimadiisa ku cadeynayay, kaas oo ku dhaganaa inta u dhaxeyso Masjidka Isbaheysiga iyo hotel SYL oo u dhow Madaxtooyada Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta aan la hadalnay ayaa sheegay in maanta duhurkii sawirkaan la fujiyay waxayna ku eedeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa koofiya casta ee ilaaliya Madaxtooyada Soomaaliya.
Sida ay ku warameen masuuliyiinta Xisbiga Wadajir waxaa la filayaa in dhowaan ay shaaciyaan, in ciidanka Madaxtooyada oo amar ka qaadanaya saraakiil ka tirsan Villa Somalia ay fujiyeen sawirka Musharax Cabdiraxamaan Cabdishakuur oo ka tirsan masuuliyiinta sanadkaan u tartamaya Xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Saraakiil ka tirsan kuwa ilaalada Madaxtooyada iyo Villa Somalia oo aan la xariirnay ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan arrintaan, waxeyna u muuqaataa xaalad kale oo cusub, taas oo saameen karta ololaha doorashada Musharaxiinta Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada sanadkaan.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxa uu ahaa musharaxii ugu horeeyay ee boorar ku dhagsada Muqdisho waxaana jirta cabsi kale oo ay ka qabaan in laga fujiyo kuwa kale ee ku dhagan wadooyinka Muqdisho.
Previous articleXog: Shariif oo Jowhar u jooga inuu laba arrin midkood u xaqiijiyo beesha Xawaadle
Next articleMaareeye oo ka hor-yimid bayaankii ay xildhibaanada Dir kula safteen xukuumadda
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayey madasha Talo-wadaag ayaa sheegay in Fahad Yaasiin oo hadda ah agaasimaha nabad sugidda uu...